inkampani German ukwenziwa ukukhanya-ingxubevange isondo akwazi ukugcina Borbet yinkampani elitheni emakethe yezimoto futhi eminyakeni engaphezu kuka-35 ukujabulisa amakhasimende ayo nge eliphezulu futhi umkhiqizo okunokwethenjelwa nge design stylish. U-Adalberto isikhathi eside inkampani eseke amagatsha emazweni anjenge Germany, e-USA, South Africa ne-Austria. Izinzuzo elingenakuphikwa lokhu brand zihlanganisa olutheni kule ndawo, anhlobonhlobo imishini eziphambili, tisebenti leticeceshiwe kanye nokulawula izinga ohlelweni.
abakhiqizi Disc ozama akhiqize imikhiqizo ezihlukahlukene design, okuvumela amakhasimende ukukhetha imikhiqizo kuhlangene isitayela kanye nosayizi imoto. Borbet ingenye ekukhiqizweni yasekuqaleni amasondo yabalingisi for brand yezimoto ezifana Toyota, Maserati, Jaguar, McLaren kanye nezinye brand eziningi, okuyinto eyabonisa ezingeni eliphezulu inkampani futhi ikhwalithi yemikhicito.
Okwamanje, emakethe emelelwa kungathi izinkulungwane ezimbili ezihlukahlukene osayizi kanye imiklamo lamadiski: ezemidlalo, classic, okunethezeka izimpawu, abathengi Ungakhetha amafomu ezingalindelekile, imibala kanye ezinengilazi. amasondo endleleni Borbet kuhluke kokubili egqamile izimfanelo zangaphandle lifanele ngezinto eziqinile ongachayekile amathonya zangaphandle. imikhiqizo abashayeli ujabule ekuphileni eside yenkampani, ukuze uma ikubona inani elikhulayo amakhasimende wanelisekile. Akumangalisi ukuthi kusukela Borbet amasondo athandwa kakhulu emazweni amaningi, futhi Russia iyathinteka. Ukuze abashayeli bethu ukuba ngumnikazi amasondo ingxubevange we izinga German at an ngentengo eqolo - kungcono unhlangothi wangempela inhlanhla.
Labo abafisa ukuthenga amasondo esinegama, qiniseka uxhumane ezikhethekile inthanethi amasondo esitolo kanye amathayi, esihlinzeka izinsizakalo zayo izakhamuzi Russia. Ngo lwemibhalo virtual, ungathola onobuhle ezingaphezu kuka-70 ahlukene kusukela Borbet yesiteleka kanye nezinye brand okudayisa. Uma ukuthenga i-CD kuyinto umbandela kubalulekile ukukhethwa nemingcele efanele umkhiqizo, njengoba zibhekene ngqo imodeli ngamunye imoto. Consultants esitolo inthanethi uzokusiza ngokuchaza nemingcele ezidingekayo ukuthola ubukhulu esiqondile imodeli oyithandayo bese ukunikeza ulwazi oludingekayo. I ngemoto ikhithi kuthiwa ngokugxilisa izindandatho iziqobosho, kanye nokuhlinzeka amakhasimende intengo okungabizi ukulethwa fast and amabhonasi nice ngesimo izaphulelo kuma onobuhle ezithile.
Yikuphi isondo is best zokuhamba sezulu yethu?
Indlela yokwenza zemabula manicure gel sula?